Olona roa maty nihinana zavatra notsimponina teny amin’ny fako – Midi Madagasikara
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2014 → juin → 3 → Olona roa maty nihinana zavatra notsimponina teny amin’ny fako
Olona roa maty nihinana zavatra notsimponina teny amin’ny fako
Redaction Midi Madagasikara 3 juin 2014
Ny alahady teo, olona dimy no fantatra fa narary mafy vokatry ny fihinanana zavatra miendrika sira tanaty fonosana notsimponina teny amin’ny fanariam-pako teny Mangatokana Antanimalandy, tany Mahajanga. Maty anefa ny roa tamin’izy ireo fotoana vitsy taorian’ny nihinanany an’ilay zavatra.
Fasam-bahoaka, tobim-panariam-pakon’ny Kaomina, sy fanarian’ireo orinasa mpikirakira drakaka ny vokatr’izy ireo simba, no tena ahafantarana ny tanànan’i Mangatokana. Hita ao isan’andro koa ireo fianakaviana sahirana, mitsikera fako ikarohan’izy ireo zavatra azo hanina na azo avadika ho vola. Anisan’ireo ity raim-pianakaviana iray, nitsimpona fatina drakaka hataony sakafon’ny kisoa hono, ary nitsimpona ihany koa, fonosan-javatra fotsy iray izay miendrika vovon-tsira anaty plastika, nisy nanary teny. Nampiasain’ilay rangahy avy hatrany tamin’ny sakafo harivan’io alahady io ihany ity noheveriny ho sira hanamamiana ny ananambo sy tsivakia (patsa fotsy) natao laoka. Taorian’ny fihinan’izy ireo izany laoka izany anefa dia nandoa sy nalemilemy avy hatrany ny iray trano, afa-tsy ny renim-pianakaviana, izay variana nanasa lamba ka tsy mbola nihinana. Dimy mianaka no nahiditra teny amin’ny CHU Androva ny alin’io rehefa nialana nenina nampandoavina. Araka ny vaovao nomen’ny lehiben’ny hopitaly dia maty ilay raim-pianakaviana raha voa tonga tany, ary ny zanany lahy 7 taona dia teny an-dàlana no namoy ny ainy. Ireo marary telo mianadahy sisa, izay samy zanak’ilay fianakaviana, dia mbola tsaboina ka ny roa ao amin’ny fitsaboana zaza, ny iray, 15 taona ao amin’ny sampana vonjy aina, hoy ny mpitsabo.
Mbola tsy fantatra mazava hoe inona marina ity vokatra simika miendrika vovon-tsira ity, fa nilaza ny mbola hanadihady eny Mangatokana ny avy amin’ny Bureau Municipal d’Hygiène (BMH) eto Mahajanga, indrindra fa ny mahakasika ireo drakaka simba ariana eny.